सर्वश्रेष्ठ Nostalgic Turntables 2017 - क्रेता गाइड - चीन 10TURNTABLES
बेल्ट ड्राइव Turntables
पोर्टेबल सुटकेश Turntables
> सर्वश्रेष्ठ Nostalgic Turntables 2017 - क्रेता गाइड
सर्वश्रेष्ठ Nostalgic Turntables 2017 - क्रेता गाइड
Nostalgic Turntables विशिष्टता तुलना
ब्रान्ड नाम Turntable गति Platter सीडी प्लेयर AM / एफएम रेडियो बटन
Electrohome विलिङ्गटन रेकर्ड प्लेयर (EANOS502)3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
Electrohome हस्ताक्षर विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable (EANOS700)3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
Vicrola Nostalgic क्लासिक काठ 6-मा-1 ब्लुटुथ Turntable3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
Crosley CR704C-पीए संगीतकार Turntable3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
Vicrola Nostalgic Aviator काठ 7-मा-1 ब्लुटुथ Turntable मनोरञ्जन केन्द्र, महोगनी3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
ग्रेस डिजिटल GDI-TW3USB 7-मा-1 स्टेरियो मनोरञ्जन केन्द्र, लाल शिमला खुर्सानी3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
JPyle PTCD54UB ब्लुटुथ Vintage क्लासिक शैली Turntable अध्यक्ष प्रणाली3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
Sylvania SRCD838 Nostalgic Turntable3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
PYLE Vintage विनाइल Turntable स्टेरियो प्रणाली (PTCD64UBT)	3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
PYLE Vintage विनाइल Turntable स्टेरियो प्रणाली (PTCD64UBT)3गति खेल्छ प्लास्टिक √ √ मूल्य चेक
हालै Turntable लागि समीक्षा
सर्वश्रेष्ठ बेल्ट ड्राइभ Turntables 2017-क्रेता गाइड
सर्वश्रेष्ठ नमस्ते-फाइ Turntables 2017 - क्रेता गाइड
सर्वश्रेष्ठ पोर्टेबल सुटकेश 2017-क्रेता गाइड Turntables
01 • Electrohome विलिङ्गटन रेकर्ड प्लेयर (EANOS502)
निर्माण सामाग्री: (MDF मध्यम घनत्व fiberboard)
स्वतः रिटर्न: हो
रेकर्ड गति: 33, 45, 78
वक्ता साइज: 2x 5W (3 ") 8 Ohms
आवृत्ति सीमा (AM): 530-1710 kHz
आवृत्ति सीमा (एफएम): 88-108 मेगाहर्ट्ज
शक्ति उपभोग: 19 वाट
आकार (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच): 19.29 "X 12.6" X 9.1 "
प्रमाणपत्र: एफसीसी, ICES, ETL / CETL
को Electrohome विलिङ्गटन रेकर्ड प्लेयर एक प्रामाणिक4मा 1 रेट्रो turntable तपाईंले आफ्नो सबै समय मनपर्ने सुन्न अनुमति दिन्छ। 100 भन्दा बढी विकास वर्ष द्वारा inpired थियो महोगनी काठ र एनालग अडियो सिस्टम यसको furbished। यो रेकर्ड प्लेयर सीडी गरेको AM / एफएम रेडियो, र को पाठ्यक्रम एक Vinyl खेलाडी जस्तै धेरै मोड हुन्छन्। यी सबै मोड एक उज्यालो मिलाउने डायल द्वारा नियन्त्रित छन्। वास्तवमा, तपाईंले आफ्नो फोन र vinyls वर्तमान छैनन् जब प्ले संगीत जडान गर्न सक्षम छन्; अब केवल अचम्मको छ?
रेकर्ड प्लेयर महोगनी काठ मा संलग्न छ किनकी यो ध्वनि गुणवत्ता समृद्ध र इष्टतम ध्वनि प्रदर्शन प्राप्त गर्न सक्छन् प्रदान गर्दछ। तपाईं निजी सुन्न रुचि भने, जो तपाईं आफ्नो हेडफोन प्लग इन गर्न अनुमति दिन्छ एक पोर्ट छ। तर यसको छैन केवल एक विशाल भूमिका तर साथै प्रयोग सुई खेल्छ कि काठ, यो एक थप न्यानो र प्राकृतिक अनुभूति अडियो गुणस्तर बढाउँछ एक नीलम टिप दिनुभयो माटोको सुई छ।
यो रेकर्ड प्लेयर को सबै भन्दा राम्रो भाग को एक तपाईं खेलाडी नै युएसबी पोर्ट मार्फत आफ्नो फोनमा तपाईंको आफ्नै vinyls रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई छ। कुनै कम्प्युटर आवश्यक, बस आफ्नो USB र रेकर्डमा प्लग। यो अविश्वसनीय सरल र प्रयोगकर्ता मैत्री छ। केवल $ 149,99 मा मूल्य, यो एक चोर्न निश्चित छ। समग्र को विलिङ्गटन रेकर्ड प्लेयर असाधारण छ।
1 वर्ष वारेन्टी।
कम्प्युटरमा जडान बिना यूएसबी पोर्ट देखि एउटा एल्बम रेकर्ड गर्न सक्षम।
जब नयाँ Vinyl प्ले छ, केही रुक सुने गर्न सकिन्छ।
02 • Electrohome हस्ताक्षर विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable (EANOS700)
समाप्त: रियल काठ पोशिश
रेकर्ड खेलाडी: हो
रेकर्ड स्वतः रिटर्न शाखा: हो
युएसबी प्लेब्याक: हो
युएसबी रेकर्डिङ: हो
3.5mm सहायक इनपुट: हो
वक्ता साइज: 2x 5W 8 Ohms (2.6 ") 2x15W 8 Ohms (3.6")
पावर एडप्टर इनपुट: 120V - 60 हर्ट्ज
पावर एडप्टर आउटपुट: 11V 1,100mA
शक्ति उपभोग: 50 वाटमा
आकार (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच): 17.9 "X 13.5" X 12.1 "
आधुनिक प्रविधिको एक मामूली स्पर्श एउटा क्लासिक शैली turntable खोज्दै हुनुहुन्छ? यो तपाईं को लागि मोडेल छ रूपमा कुनै थप हेर। यो turntable प्राकृतिक काठ बनाउनुभयो र AM / एफएम, सीडी, USB र एमपी3संग एक उच्च-FI स्टेरियो सिस्टम छ। Vinyl-को एमपी -3 स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको लागि रेकर्डिङ र औक्स इनपुट, यो साँच्चै सबै राउंडर turntable छ।
Electrohome 100 वर्ष को लागि अडियो उत्पादनहरु बनाउन गरिएको एक कम्पनी हो। तिनीहरूले ओन्टारियो मा स्थापित छन् र एक पटक "रेडियो को रोयल्टी" को रूपमा चिनिन्थे। $ 199,95 को मूल्य को लागि, यो वायरलेस संगीत प्रवाहको लागि निर्मित छ ब्लुटुथ र यसलाई (, स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्याप्टप, कम्प्युटर आदि) आफ्नो मनपर्ने ब्लुटुथ उपकरणहरू सबै काम गर्छ। एमपी -3 रेकर्डिङ गर्न विनाइल तपाईं हेडफोन ज्याक इनपुट मार्फत डिजिटल अडियो फाइलहरू आफ्नो Vinyl रेकर्ड बारी गर्न अनुमति दिन्छ। यो डायल साथै AM / एफएम रेडियो लागि प्रदर्शन र पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर छ। तपाईं आवश्यक सबै सुविधाहरू यस मोडेल भित्र खचाखच भरिएको छन्।
एक अति चिकना पुराना डिजाइन, यो निश्चित रूप देखि आफ्नो yesteryears को स्मरण गराउन गर्छ। एक nostalgic अनुभूति बन्द दिने, तपाईं 60s फिर्ता हुनुहुन्छ लाग्छ चाहन्छु। यो turntable के प्रेम होइन? आफ्नो बजेट $ 100- $ 200 भित्र छ भने एक गम्भीर यो turntable रही विचार गर्नुपर्छ।
संगीत रेकर्ड सजिलै।
सबै vinyls लागि उपयुक्त।
गति लामो पछिल्लो गर्दैन।
03 • Vicrola Nostalgic क्लासिक काठ 6-मा-1 ब्लुटुथ Turntable
कार्य: सीडी प्लेयर, क्यासेट प्लेयर, निर्माण-मा वक्ताहरु
उत्पादन प्रकार: वक्ता
समावेश गर्दछ: एसी पावर एडप्टर
एक्स 18 इन्च डब्ल्यू
वजन: 14.9 पाउण्ड
वारेन्टी विवरण: 1 वर्ष लिमिटेड निर्माता वारेन्टी
ब्याट्री: प्रयोग कुनै ब्याट्री
वस्तु स्टोर नम्बर (DPCI): 008-03-0400
के तपाईं कहिल्यै आफ्नो घर अप अनुभूति गर्न साँच्चै पुरानो पुराना देख turntable खेलाडी छन् चाहनुहुन्छ? राम्रो यो मोडेल यो सबै छ। अचम्मको nostalgic पुराना एक शानदार सफा ध्वनि साथ देखिन्छ। प्रविधि द्वारा एक मोडेल, यो तीन-गति turntable (33 1/3, 45, 78 RPM) आफ्नो मनपर्ने Vinyl रेकर्ड र एल्बम को सबै खेल्छ।
केवल $ 79,99, reasonably मूल्य हो जसमा मूल्य, यो निर्मित ब्लुटुथ आफ्नो ब्लुटुथ सक्षम उपकरणहरु तार आफ्नो संगीत बजाउन आउँछ; कुनै तार आवश्यक। सबै आफ्नो सुविधाको लागि, यो एक राम्रो turntable छ। यो पनि निर्मित सीडी प्लेयर, क्यासेट प्लेयर र एफएम रेडियो छ। एक केबल कुनै पनि गैर-ब्लुटुथ यन्त्रहरू ज्याक मा 3.5mm औक्स लागि समावेश गरिएको छ। थप के तपाईं लागि अनुरोध गर्न सक्छ? यो पनि एउटा आरसीए औक्स-मा र हेडफोन ज्याक छ।
यो मोडेल लागि बिक्री अंक यसको ब्लुटुथ क्षमता यसको मूल्य साथ अचम्मको छ भन्ने छ। खैरो मा लेपित, यो एक शानदार turntable हुनुको साथ तपाईंको जीवित हल लागि सिद्ध डेको हुनेछ। तपाईंले एक पत्थर दुई चरा मारा चाहन्छु। के मूल्य लागि बाहिर खडा निर्मित स्टेरियो स्पिकर छन्।
अत्यन्तै reasonably मूल्य।
यो नयाँ रेकर्ड आउँदा यो एक सानो बिट skips।
04 • Crosley CR704C-पीए संगीतकार Turntable
कार्य: सीडी प्लेयर, क्यासेट प्लेयर
शक्ति स्रोत: प्लग-इन विद्युत चालित
समावेश गर्दछ: / b> एसी पावर एडप्टर, प्रयोगकर्ता म्यानुअल
x 17 इन्च डब्ल्यू
वजन: 17 पाउण्ड
मूल केंटकी संयुक्त राज्य अमेरिका देखि, Crosley प्रविष्टि स्तर turntable किन्न देख audiophiles लागि एक राम्रो तरिकाले स्थापित ब्रान्ड हो। तपाईंले बजेट हुनुहुन्छ तर राम्रो गुणस्तर को एक मोडेल छ गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो मोडेल बजार मा सबै भन्दा कम मूल्य पुराना turntable को छ। यो मोडेल साँच्चै पुराना देखिएला तापनि प्रविधि छैन।
$ 104,99, तपाईं यो मोडेल मा आफ्नो हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक बेल्ट संचालित (33 1/3, 45, र 78 RPM) turntable3गति खेल्छ छ। यो पनि एक प्रोग्रामयोग्य 20-ट्रयाक स्मृति छ र पक्ष-माउन्ट क्यासेट डेक संग आउछ जो एक सीडी प्लेयर छ। यो अडियो पोर्टेबल तयार छ रूपमा केवल आफ्नो स्मार्टफोन वा एमपी3प्लेयरमा प्लग। यो AM / एफएम रेडियो साथै हवाइजहाज मिलाउने डायल आउँछ छ। बन्द, यो गतिशील पूर्ण दायरा स्टेरियो स्पिकर छ भने माथि।
डिजाइन अचम्मको छ र खैरो मा लेपित छ। यो मोडेल को मात्र नकारात्मक यो एक हेडफोन ज्याक छैन भन्ने छ। तर यो अन्य सुविधाहरू छ र ध्वनि गुणवत्ता यसको लागि माथि बनाउँछ। समग्रमा, यो एक शानदार turntable छ र यो आफ्नो बजेट भित्र छ भने, दुई पटक सोच्न छैन।
05 • Vicrola Nostalgic Aviator काठ 7-मा-1 ब्लुटुथ Turntable मनोरञ्जन केन्द्र, महोगनी
कार्य: निर्मित मा प्रस्तुतकर्ता, सीडी प्लेयर, सीडी रिकर्डर, AM / एफएम रेडियो
उत्पादन प्रकार: अध्यक्ष, 3.5mm ज्याक
समावेश गर्दछ: रिमोट कन्ट्रोल, एसी पावर एडप्टर
एक्स 21 इन्च डब्ल्यू
वजन: 25.2 पाउण्ड
$ 154,99 मा मूल्य, यो प्रविधि अर्को ठूलो मोडेल छ। यो सिर्फ ठूलो मूल्य निर्धारण छैनन् तर यो पनि एउटा अचम्मको मोडेल छ। यसलाई डिजाइन एक साँच्चै राम्रो प्रामाणिक रेट्रो अनुभूति बन्द दिन्छ र खैरो मा लेपित छ छ। तपाईं पुराना कुराहरू मा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको ध्यान पकड सक्छ।
यो तीन गति turntable छ (33 1/3, 45, 78 RPM) आफ्नो मनपर्ने Vinyl रेकर्ड र एल्बम को सबै खेल्छ भनेर। सर्वश्रेष्ठ भाग, यसको वास्तविक काठ निर्माण शानदार छ। यो निर्मित छ ब्लुटुथ आवश्यक कुनै पनि तार बिना आफ्नो ब्लुटुथ सक्षम उपकरणहरु बाट बिना तार संगीत बजाउन। साथै, यो सजिलै संग एक सीडी गर्न vinyls र कैसेट directy आफ्नो मनपर्ने संगीत को सबै रेकर्ड; कुनै कम्प्युटर आवश्यक।
यो पनि एक निर्मित सीडी प्लेयर, क्यासेट प्लेयर र पुराना जमानाको रोटरी ट्युनर छु / एफएम रेडियो छ र पूर्णतया कार्यात्मक रिमोट नियन्त्रण र स्टेरियो स्पिकर समावेश रूपमा यो सबै गोलाकार turntable छ; अचम्मको यो छैन? एक केबल कुनै पनि गैर-ब्लुटुथ उपकरणको लागि औक्स इनपुट लागि समावेश गरिएको छ र द्वितीय एक आरसीए औक्स-मा र हेडफोन ज्याक साथै छ। निष्कर्ष मा, यो यसको प्रशंसनीय समीक्षा लागि आफ्नो सर्टलिस्ट लिपिबद्ध हुनुपर्छ।
ब्लुटुथ साँच्चै छिटो जडान।
प्याकेजिङ्ग उत्कृष्ट थियो।
एक nostalgic नजर ठूलो संकुचित प्रणाली।
सीडी समारोह सुधार गर्न आवश्यक छ।
06 • ग्रेस डिजिटल GDI-TW3USB 7-मा-1 स्टेरियो मनोरञ्जन केन्द्र, लाल शिमला खुर्सानी
SPECIFICATIONS पर्यावरण विशेषताहरु अन्य सुविधाहरू:
सीडी र संगीत खेलाडी: हो
सीडी रेकर्डिङ: हो
स्टेरियो च्यानलहरु: 2.0
ऊर्जा तारा योग्य: कुनै
साफ प्याकेजिङ्ग: हो
मूल को देश: चीन
RoHS मिल्दो: कुनै
प्याकेजिङ्ग को प्रकार: Retail बक्स
वारेन्टी: 90 दिन, Retail प्याकेज आयाम: Height: 24 ", Length: 17", Width: 16 ", Weight: 27 Lbs,
ग्रेस डिजिटल स्यान डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित कि अडियो कम्पनी हो। एक अडियो कम्पनी राम्रो तरिकाले स्थापित अझै राम्रो सम्मान। यो मोडेल को मूल्य छ कति तपाईं सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो पुराना रेकर्ड प्लेयर $ 143,73 मूल्य हो।
यो एक रेकर्ड प्लेयर, क्यासेट प्लेयर, सीडी प्लेयर र AM / एफएम स्टेरियो आउँछ एक रेट्रो turntable छ; आफ्नो सबै अडियो आवश्यकता खानपान। यसको गति सन्दर्भमा, यो खेल्छ 33, 45 र 78 RPM रेकर्ड र यो एक स्वचालित टोन हात छ। के साँच्चै अचम्मको छ यो दुई पूर्ण-सीमा वक्ता निजी सुन्न रुचि ती लागि हेडफोन ज्याक मा निर्मित संग उत्कृष्ट स्टेरियो ध्वनि पठाएमा कि छ भन्ने छ। एक आरसीए लाइन उत्पादन साथै एक विकल्प उपलब्ध छ। आफ्नो पीसी गर्न रेकर्डिङ वा म्याक साथै यूएसबी पोर्ट र समावेश गरिएको छ कि धृष्टता GenericName ध्वनि Editer सफ्टवेयर निर्माण प्रयोग सजिलो छ।
यसको डिजाइन सन्दर्भमा, यो एक पुरानो पुराना महसूस दिन एक लाल शिमला खुर्सानी काठ शैली मन्त्री हो। तपाईं यस मोडेल प्राप्त गर्नुपर्छ भने तपाईं आफैलाई सोधेर हुनुहुन्छ भने तपाईंले थप कुनै पनि सोध्न हुँदैन। यो त प्रयोगकर्ता-अनुकूल यसलाई अविश्वसनीय छ हो! यो एकदम द्रुत साथै डिस्क बल्छ। समग्रमा, यो मोडेल शीर्ष निशान छ र यो आफ्नो इच्छा सूची को भाग हुनुपर्छ।
प्रयोगकर्ता मैत्री कार्यक्रम र बल्न एक डिस्क एकदम द्रुत।
यो नयाँ Vinyl आउँदा थोडा skips।
07 • PYLE PTCD54UB ब्लुटुथ Vintage क्लासिक शैली Turntable अध्यक्ष प्रणाली
वजन: 22 एलबीएस
एकाइ आयाम: 20.08 "X 13.39" X 8,86 "
रंग: खैरो काठ (मेपल फुट्छ)
PYLE द्वारा एक अचम्मको मोडेल, यो हो 6-मा-1 एक क्लासिक शैली turntable छ। यो फैंसी केही छ हुनत, यो एकदमै बहुमुखी छ र यो काम गर्छ। यो तपाईं एक आधुनिक सुन्न अनुभव दिन हुनेछ पुराना turntable छ।
यो कि वायरलेस संगीत स्ट्रिमिङ लागि निर्मित ब्लुटुथ आउँछ एउटा अचम्मको आधुनिक प्रविधि छ। सर्वश्रेष्ठ भाग, यो यस्तो आईफोनहरु, एन्ड्रोइड, स्मार्टफोन, आईप्याड, पाटी, आदि रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत ब्लुटुथ उपकरणहरू सबै काम गर्दछ यो मोडेल छ एक निर्मित सीडी प्लेयर, स्लट-मा क्यासेट डेक, पूर्ण दायरा स्टेरियो स्पिकर र AM / एफएम तपाईंको ध्यान फसाउन डायल प्रदर्शन संग रेडियो। एमपी -3 रेकर्डिङ विनाइल लागि, तपाईं एक हेडफोन ज्याक इनपुट संग डिजिटल अडियो फाइलहरू मा आफ्नो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एमपी -3 प्लेब्याक लागि, एक USB फ्लैश ड्राइव पाठक त्यहाँ। सुविधाजनक यो छैन?
यसलाई गरेको डिजाइन को लागि, यो एक काठ मन्त्री छ र यो एउटा वास्तविक nostalgic भावना बन्द दिन्छ। सुनको अलिकति स्पर्श संग खैरो मा लेपित, यो मोडेल आफ्नो घर मा राम्रो हेर्न बाध्य छ। यसको काठ मामला यसको कलाकृति कुनै पनि दोस्रो छ। सर्वश्रेष्ठ भाग? यो मूल्य छ। यो मोडेल $ 129,99 मूल्य हो।
खैरो काठ (मेपल फुट्छ)
सीडी उत्पादन कम्प्युटर गर्न Vinyl रेकर्ड देखि डाउनलोड गर्ने क्षमता।
स्मार्टफोन जडान गर्न सक्षम।
ब्लुटुथ प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ।
गति सेटिङ: 45RPM, 33.3RPM, 78RPM
सुविधाहरू: वक्ताहरु निर्मित इन-, रेखा-मा ज्याक, AM / एफएम रेडियो, सीडी रिकर्डर
ड्राइभ प्रकार: बेल्ट ड्राइभ
चौडाई: 15.0 मा
उचाई: 11.5 मा
गहिराई: 11.0 मा
Sylvania यस मोडेल अरूलाई तुलना साँच्चै विशेष छ। तिमी धेरै कम मूल्य अझै धेरै कार्य छ कि एक turntable खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईं को लागि turntable छ।
Sylvania यस मोडेल उच्च गुणवत्ता वक्ता संग 5-मा-1 turntable तपाईंको ध्यान पकड छ। केवल $ 64,62 मा मूल्य, तपाईं सबै आफ्नो मनपर्ने रेकर्ड, सीडी, टेप कैसेट र हावा रेडियो स्टेशन भन्दा खेल्न सक्षम छौँ। यो पनि कुनै पनि अडियो उपकरण जडान गर्न एक औक्स-आगत छ। यो एक सुरुचिपूर्ण nostalgic काठ समाप्त उत्कृष्ट र साँच्चै चिकना छ कि एक ओभरसाइजगरिएको क्लासिक डायल छ छ।
यो नयाँ vinyls आउँदा यो एक सानो बिट skips हुनत, यो अचम्मको काम गर्दछ र यो एउटा ठूलो मूल्य छ। यो असाधारण र साँच्चै बैजनी कोटिंग संग विशेष देखिन्छ। आफ्नो बजेट तल $ 100 छ भने यो तपाईंको ईच्छा हुनुपर्छ।
अचम्मको काम गर्छ।
यो नयाँ vinyls आउँदा थोडा skips।
09 • PYLE Vintage विनाइल Turntable स्टेरियो प्रणाली (PTCD64UBT)
Turntable गति सेटिङ: /333-1 RPM, 45 RPM, 78 RPM
आयाम: 19.4 x 13.2 x 9.2 इन्च
वारेन्टी: 1 वर्ष निर्माता
मोडेल नम्बर: PTCD64UBT
PYLE अर्को मोडेल, यो सबै $ 149,99 को मूल्य को लागि USB रिकर्डर संग ब्लुटुथ सीडी, USB, एसडी कार्ड खेलाडी उपयुक्त छ कि एक turntable स्टेरियो सिस्टम छ। तपाईं बजेट छ भने, तपाईं एक हार्टबिट यो मोडेल प्राप्त गर्नुपर्छ।
रंगीन खैरो मा, यो क्लासिक शैली turntable ठूलो आधुनिक प्रविधि छ र सबै आफ्नो व्यक्तिगत ब्लुटुथ उपकरणहरूमा कार्य गर्दछ। एमपी -3 रेकर्डिङ vinyl पनि गर्न सकिन्छ। यो डायल प्रदर्शन आफ्नो ध्यान र AM / एफएम रेडियो आकर्षित गर्न पूर्ण दायरा स्टेरियो स्पिकर आउँछ। एक औक्स इनपुट पनि पछिल्लो प्यानल मा देख्न सकिन्छ। के यो मोडेल यसलाई साँच्चै राम्रो जडान रूपमा ब्लुटुथ समारोह हो छ बारे साँच्चै अचम्मको छ।
यो मोडेल सबै एउटै आधुनिक प्रविधि संग एक क्लासिक खेल शैली जोडती। यो काठ मन्त्री परिष्करण असाधारण छ र यो अचम्मको कलाकृति छ छ। कार्यालय वा घर दुवै लागि उपयुक्त, त्यहाँ साँच्चै तपाईं बजेट छ भने यो मोडेल प्राप्त गर्न एउटा कारण छ। समग्रमा, यो मोडेल छैन यो मूल्य बाहेक खराब छ।
यो एक राम्रो नजर छ।
ब्लुटुथ साँच्चै राम्रो जडान।
सर्वश्रेष्ठ पोर्टेबल सुटकेश Turntables 2017-Bu ...
"तपाईं अपराध मा एक साथी चयन रूपमा आफूलाई सबैभन्दा महत्व छ भन्ने नै सुट।"
तपाईं turntables वा रेट्रो उत्पादनहरु खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने, turntable.com मा आधारभूत समीक्षा सम्झना छैन। यो एक ठूलो सम्झौता गर्न मद्दत गर्छ।
नवीनतम लोकप्रिय ब्लग
प्रतिलिपि अधिकार © 2017 · www.10turntables.com, सबै अधिकार सुरक्षित। शक्ति SinoArt द्वारा